जडीबुटी काण्डको पाठ र नेपालका शिक्षकहरुको मनोवृत्ति
जनतापाटी आइतबार, फागुन २५, २०७६ मा प्रकाशित
जडीबुटीमा रहेको जागृती एकेडमीकी सामाजिक विषयकी शिक्षिका सितालक्ष्मी कर्माचार्यले परिक्षामा थोरै नम्बर ल्याएको आरोपमा कक्षा ६ का २५ र ७ का ९ जना विद्यार्थीको हात चिर्न लगाइन । घटनापछि प्रहरीले शनिबार उनलाई पक्राउ गर्यो भने उनी गल्ती भएको भन्दै माफी मागेको समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन् ।
शिक्षकले विद्यार्थीलाई यातना दिएका घटनाहरु बेला बेलामा सार्वजनिक हुदैं आएका छन् । नेपालमा मात्र होइन, विकसित देशहरुमै पनि यदाकदा शिक्षकले अमानविय तरिकाले यातना दिने गरेका घटनाहरु सुन्न र देख्न पाइन्छ । तर, सितालक्ष्मीले दिएको जस्तो यातना संभवतः अहिलेसम्म सुनिएको थिएन । लाइन लगाएर हात चिर्न लगाउनु भनेको आतंककारी समुहले अपहरण गरेका व्यक्तिहरुलाई लाइन लगाएर गोली हानेको भन्दा पनि विभत्स घटना हो । बालवालिकालाई कानुनले समेत फौजदारी अभियोगबाट मुक्ति दिएको हुन्छ । जतिसुकै ठूलो अपराध गरे पनि नावालकको हकमा कानुनले नै छुट दिएको हुन्छ । यहां ६—७ कक्षामा पढ्ने विद्यार्थी भनेको १०,११ र बढीमा १२ वर्षका हुन् । शिक्षिकाको डरले आफ्नो हात चिरिरहंदा वा साथीले हात चिरेको घटनाको प्रत्यक्षदर्शी भैरहंदा तिनीहरुको दिमागमा के असर परे होला र त्यसको पीडावोध कति लामो समयसम्म रहला ? यो सवैभन्दा गंभिर पक्ष हो । संयोगले कुनै दुर्घटना घट्न पाएन, तर हात चिर्दा चिर्दै कुनै बच्चाको ज्यान जान पनि सक्थ्यो । तिनीहरुलाई हात चिर्न लगाउने जस्तो यातना दिनु कुनै आतंककारी काम भन्दा कम होइन । त्यसैले ती शिक्षिका सिता लक्ष्मीलाई आतंककारीहरु माथि गरिने व्यवहार सरह व्यवहार गरिनु पर्छ र उनीमाथि हदैसम्मको कारवाही गरिनु पर्छ ।
निश्चय पनि सितालक्ष्मी प्रकरण केवल उनीमा मात्रै सिमित छैन । अर्थात यस्को दोषि सितालक्ष्मी मात्र होइनन् । वास्तविक चुरो नेपालमा शिक्षक नियुक्तिको मापदण्ड, उनीहरुले पाउने सेवा, शर्त सुविधा र शिक्षा नीतिसंग गएर जोडिन्छ । नेपालमा नीजि क्षेत्रका शिक्षण संस्थामा शिक्षक नियुक्तिको कुनै स्पष्ट मापदण्ड छैन । सम्वन्धित विषयमा तोकिएको शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको सर्टिफिकेटको आधारमा शिक्षक नियुक्ति गरिन्छ । ‘क्लास अब्जर्भेशन’ भनेर एक पिरियड पढाउन लगाइए पनि त्यो फगत औपचारिकता बन्ने गरेको छ ।
जडिबुटी काण्डको स्पष्ट सन्देश हो—शिक्षक नियुक्ति गर्दा सम्वन्धित व्यक्तिको प्रमाण पत्र र ‘क्लास अब्जर्भेशन’ गरेर मात्र पुग्दैन । उसको मानसिकता पनि परिक्षण गर्नु पर्छ ।
दुर्भाग्य ! नेपालमा अहिलेसम्म सामान्य रुपमा समेत त्यस्तो अभ्यास नै शुरु हुन सकेको छैन । त्यसको मापदण्ड त कुरै भएन ।
त्यसमाथि नीजि शिक्षण संस्था शिक्षकहरुलाई विद्यालयहरुले दोहोरो तनाव दिइरहेका छन् । एउटा त अभिभावकबाट चर्काे शुल्क असुल्ने उनीहरुले शिक्षकलाई निकै थोरै तलव सुविधा दिन्छन् । शिक्षकहरुले जति काम गर्नुपर्छ, त्यसको तुलनामा निकै थोरै तलव सुविधा पाएपछि शिक्षकहरु तनावमा रहनु अस्वाभाविक होइन ।
अर्काेतर्फ विद्यार्थी राम्रोसंग पास नभए नयां भर्ना लिन गाह्रो हुने बुझेका स्कुलका मालिकहरुले शिक्षकलाई जहिले पनि ‘राम्रो रिजल्ट’को लागि दवाव दिइरहेका हुन्छन् । कतिपय अभिभावकहरुबाट पनि शिक्षकले विभिन्न निहुंमा तनाव भोगिरहेका हुन्छन् । कुनै पनि विद्यार्थीलाई फेल नहुन भन्ने मान्यताको आधारमा श्रेणी पद्धती (ग्रेडिङ सिस्टम) लागू गरे पनि स्कुल कलेजहरुले नै त्यसलाई हांसोको माध्यम बनाइरहेका छन्—यति ग्रेड भनेको यति नम्बर हो भनेर । अर्थात् नेपालको शिक्षामा लागू गरिएको भनिएको श्रेणी पद्धतीलाई शिक्षा क्षेत्रकै व्यक्तिहरुले राम्रोसंग अपनाउन सकिरहेका छैनन् । स्कुल, कलेजका संचालकहरु हरेक कुरामा आफ्नो विद्यार्थी र स्कुललाई नेपाल टप, जिल्ला टप भएको व्यानर झुण्ड्याउन चाहान्छन् । तर, त्यो अनुसार लगानी गर्न भने चांहदैनन्, गर्दैनन् । थोरै तलव सुविधामा अहोरात्र खटेर स्कुल र विद्यार्थीलाई ‘टपर बनाइदिनु पर्ने’ वाध्यतामा रहेका शिक्षक शिक्षिकाहरु वास्तवमा जति बेला पनि मानसिक रुपमा तनावमा रहनु पर्ने अवस्था छ । कुनै पनि पेशा र व्यवसायमा वृत्ति विकासको कुराले सबैभन्दा महत्व राख्छ । तर, नेपालमा शिक्षण पेशामा रहेका व्यक्तिहरुमा वृत्ति विकासको कुरा लगभग छैन भने हुन्छ । त्यसले गर्दा एक पटक नियुक्ति पाएको शिक्षकमा एकातर्फ जे गरे पनि फरक पर्दैन भन्ने मनमौजी हुन पुग्छ भने अर्काेतर्फ ‘यहांभन्दा माथि जाने ठाउं छैन’ भन्ने कुराले उ निराश र भित्रभित्रै आक्रामक पनि बनिरहेको पाइन्छ । शिक्षकको यो मनोवृत्ति व्यवस्थापनमा राज्य र सम्वन्धित शिक्षण संस्थाले ध्यान नदिंदा बेला बेलामा स्कुलहरु यातना गृह जस्तो बन्न पुग्छन् र त्यसको शिकार अवोध बालबालिका बन्न पुग्छन् ।
त्यसैले सितालक्ष्मी काण्डबाट पाठ सिकेर शिक्षक नियुक्तिको संम्पूर्ण प्रकृयाको साथमा उनीहरुको सेवा सुविधा र पठन पाठनको शैलीगत परिवर्तन र वृत्ति विकासका सम्भावनाहरुको बारेमा पुर्नमूल्यांकन गरिनु पर्छ । अन्यथा यस्ता घटनाहरु रोकिने छैनन्, बरु बढ्ने छन् । त्यसैले सरोकारवाला सबै पक्ष बेलैमा गंभिर बन्नु जरुरी छ ।
चार महिनापछि बस्याे पोखराको कार्यपालिका बैठक, कांग्रेसले गरेन हस्ताक्षर २ मिनेट पहिले
सहकारीले नै दुग्ध प्रशोधन केन्द्र चलाउने ३० मिनेट पहिले
वेब सिरिजको बढ्दो क्रेज, नेपाल किन भयाे कमजाेर ? ४५ मिनेट पहिले